आइपिएलमा खाता पनि खोल्न नसकेका खेलाडीहरु को-को हुन्? - हिमाल दैनिक
आइपिएलमा खाता पनि खोल्न नसकेका खेलाडीहरु को-को हुन्?
काठमाडौँ २५ चैत्र २०७७, बुधबार १८:१०
इन्डियन प्रिमियर लिगको १४ औं संस्करण शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । १४ औं सिजनसम्म आईपुग्दा आइपिएलमा धेरै ब्याट्समेन जिरोमा आउट भएका छन्। १३ सिजनसम्ममा १३ खेलाडी १० वा त्यो भन्दा बढीपटक जिरोमा आउट भएका छन् । यस लिस्टमा अस्ट्रेलियाका ग्लेन मैक्सवेल पनि समिल छन् ।
मैक्सवेलले अहिएलसम्म कुल ८२ खेल खेलेका छन् जसमा उनले खाता खोल्न नसकेको १० खेलमा छ। लिगमा अहिले सम्म मैक्सवेल दिल्ली डेयरडेविल्स, किंग्स इलेभेन पन्जाब र मुम्बई इन्डियनस बाट खेली सकेका छन् । १४ औं सिजनमा उनिलाई बिराट कोहलीले कप्तनी गरेका रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरुले १४.२५ करोडमा(भारु) किनेको थियो ।
रोहित-रहाणे १३ पटक जीरोमा आउट
टुर्नामेन्टमा ४ खेलाडी सबै भन्दा धेरै पटक खाता नै नखोली पभिलियन फर्किएका थिए । १३ पटक शून्यमा नै आउट हुनेमा ब्याट्स-मेन रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, पार्थिव पटेल र अजिक्य रहाणे पर्छन्। रोहितको कप्तानीमा मुम्बई इन्डियनसले सबै भन्दा बढी ५ पटक उपाधि आफ्नो नाम गरेको छ। उनि २०० खेल खेल्ने दोश्रो खेलाडी हुन् । उनि भन्दाअघि महेन्द्र सिंह धोनीले आइपिएलमा २०४ खेल खेलेका छन्।
जिरोमा आउट भएका खेलाडीको लिस्ट:
खेलाडी आइपिएलमा खेलेको0मा आउट भएको
रोहित शर्मा २०० १२
हरभजन सिंह १६० १२
पार्थिव पटेल १३९ १२
अजिक्य रहाणे १४९ १३
पीयूष चावला १६४ १२
मन्दिप सिंह १०४ १२
मनिष पाण्डे १४६ १२
अबाती रायुडु १५९ १२
गौतम गम्भीर १५४ १२
दिनेश कार्तिक १९६ ११
अमित मिश्रा १५० १०
ग्लेन मैक्सवेल ८२ १०
शिखर धवन १७६ १०
आइपिएलमा १०० भन्दा कम खेल्ने मैक्सवेल एक्लो खेलाडी
जिरोमा आउट भएका मैक्सवेल एक मात्र यस्ता खेलाडी हुन् जसले अहिलेसम्म १०० खेल पनि खेलेका छैनन्। उनले आइपिएलमा ८२ मात्र खेल खेलेका छन् । त्यस्तै, मनदीप सिंहले १०४ खेल खेलेका छन् । बाँकी ११ खेलाडीहरुले १३० भन्दाबढी खेल खेलेका छन्।
माथि रहेको १३ खेलाडीको लिस्टमा ९ उत्तम ब्याट्स-मेन रहेका छन् भने ३ बल्लर हरभजन सिंह, पीयूष चावला र अमित मिश्रा रहेका छन्। मन्दिप सिंह भने अलराउण्डर हुन् । त्यस्तै यसमा पाँच खेलाडीले शतक पनि लागेका छन् । रोहित शर्मा, अजिक्य रहाणे, मनिष पाण्डे, अबाती रायुडु, र शिखर धवनले भने आइपिएलमा शतक पुरा गरिसकेका छन्। एजेन्सीको सहयोगमा
आरसीबीमा पडिक्कलपछि अब डेनियल सैम्समा पनि देखियो कोरोना
रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरु (आरसीबि) का अल-राउण्डर डेनियल सैम्समा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ ।
आरिसीबिले बुधबार आफ्नो सामाजिक संजाल मार्फत यसको पुष्टि गरेको हो। आरिसिबीका अनुसार सैम्स ३ अप्रिलबाट चेन्नईमा टिमसंग सहभागी भएको हुन् ।
आईपीएलको उपाधि सबैभन्दा बढी कुन टीमले जित्यो?
आइपिएलको १३ सिजनसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा बढी मुम्बई इन्डियनसले उपाधि आफ्नो नाम गरेको छ। रोहित शर्माको कप्तानीमा रहेको मुम्बईले सन् २०१३, २०१५, २०१७, २०१९ र २०२० मा उपाधि आफ्नो नाम गरेका छन् । पछिल्लो दुई सिजन लगातार मुम्बईले कब्जा गर्दै आइराखेको छ । यस बर्षपनि मुम्बई लगातार तेस्रो पटक खिताब बचाउन कोशिस गर्ने छन् । थप पढ्नुहोस्:
आइपिएलमा अहिलेसम्म १९ हैट्रिक भएको छ । जसमा अमित मिश्रले सबै भन्दा बढी ३ र युवराज सिंहले २ हैट्रिक लिएका छन् । थप पढ्नुहोस्:
भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड(बिसीसीआइ) लाई पनि खेलाडीको स्वास्थ्यको चिन्ता हुन थालेको छ। थप पढ्नुहोस्:
अघिल्लोनेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम जारी, आज थप दुईको मृत्यु
पछिल्लोढल्कोको विद्युतीय रिक्सामा एनसीसी बैंकको क्यूआर कोडसेवाको शुभारम्भ
पन्जाबले राजस्थानलाई ४ रनले हरायो, पहिलो खेलमा नै सैमसनले लगाए शतक
आइपिएलमा आज पन्जाब र राजस्थान भिड्दै: टस हारेर ब्याटिंग गर्दै पन्जाब
आइपिएलमा केकेआरको बिजयी सुरुवात, हैदराबाद १० रनले पराजित
आइपिएलको तेस्रो खेल: केकेआर र सनराइजर्स हैदराबाद भिड्दै